Paikady hamoronana sary famantarana telo loko avy amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Rodrigo Santiago | | Logos, maro
Misy paikady tena ilaina be dia be amin'ny famoronana sary famantarana telo loko avy amin'ny sary. Tena mahaliana izany ho an'ireo mpamorona rehetra izay tsy dia mahay loatra amin'ny fanaovana sary ary te hampiasa biby na sary hafa miaraka amin'ny fahasarotana na ny realisme.
Hampiasa sarin'ny bera isika hamoronana ny fango, fa ny sary hafa dia azo ampiasaina. Ary ny zavatra voalohany hataontsika dia mamafa ny ambadiky ny Photoshop. Mba hanaovana izany dia safidio fotsiny ny afara misy ireo fitaovana fisafidianana tiany (lasso, mazika sns.) ary tsindrio tm.
Manaraka izany dia tsy maintsy desaturate ny sosona amin'ny tsindry ianao Command / Ctrl + Alt + U ary avereno atao indroa ilay sosona miaraka amin'ilay sary.
Ankehitriny, miaraka amin'ny iray amin'ireo sosona voafantina, dia mila mankany ianao Sary / fanitsiana / tokonam-baravarana ary ovao ny tokonam-baravarana ahazoana sosona iray misy ny fotsy amin'ny ankamaroan'ny sary ary misy ny drafitra mainty ihany.
Avy eo dia mila mamerina ny fizotrany amin'ny sosona faharoa sy fahatelo ianao fa mampihena ny toerana fotsy ao amin'izy ireo.
Ny sary fahatelo dia tokony hanana drafitra fotsy vitsivitsy fotsiny.
Raha vantany vao vita izany, ireo sary telo dia tsy maintsy tehirizina amin'ny rakitra samihafa miaraka amin'ny background mangarahara izay hafarantsika ao amin'ny Illustrator. Koa satria File / Toerana hapetrantsika ao anaty rakitra Illustrator ireo sary telo mitandrina mba hametahana azy ireo eo an-tampon'ny tsirairay mba hifanandrinan'ny sary. Apetraho ireo sary misy toerana fotsy kokoa ao amin'ilay sary eo ambonin'ireo izay tsy manana toerana mainty.
Raha vao apetraka dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio ambony hiseho ianao rehefa misafidy ilay sary Fanarahana sary toy ny amin'ny sary manaraka. Ny karazan-tsoroka tokony hatao dia miankina amin'ny karazana sary ampiasainao. Ny tsara indrindra dia ny fitsapana fotsiny mandra-pahitanao ilay manome ny vokatra tsara indrindra.
Vantany vao vita ny fitadiavana sary dia mila Expand, avy amin'ny menio ambony. Amin'izany no ahitam-bokatra ny zava-drehetra.
Haingam-pandeha ity fomba ity ary manome anao kinova sarin'ilay sary azonao averina atao araka izay itiavanao azy. Na dia ny zavatra voalohany tokony hatao aza dia omeo hatrany ireo sary 3 loko isan-karazany 3 araka ny hitanao amin'ity sary grayscale manaraka ity.
Raha vantany vao tafaverina ny valiny, dia efa manana sary mivalona vita amin'ny haino aman-jery azontsika ampiasaina amin'ny tetikasa rehetra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Logos » Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana telo loko amin'ny sary
Miguelángel Carretero dia hoy izy:
Maodely kokoa izy io. Misaotra ny fizarana.
Valiny tamin'i Miguelángel Carretero
Saripika mpaka sary anglisy 100 bar XNUMX ao Madrid